एसिया कप छनौट खेल्न लागि नेपाली टोलि मलेसियामा – WicketNepal
एसिया कप छनौट खेल्न लागि नेपाली टोलि मलेसियामा
Birat Jung Rayamajhi, २०७५ भाद्र ११, सोमबार २१:०३
विकेटनेपाल – भदौ ११, सोमबार
यहि अगष्ट २९ देखि सेप्टेम्बर ६ तारिकसम्म आयोजना हुने एसिया कप छनौटका लागि नेपाली टोलि सोमबार मलेसिया पुगेको छ। अभ्यास खेलका लागि श्रीलंकामा रहेको टोलि नेपाली समय अनुसार सोमबार साँझ ७:१५ बजे मलेसिया पुगेको हो। क्यारेबियन प्रिमियर लिग-२० खेलेपछि सन्दिप लामिछाने वेस्टइन्डिजबाट मंगलबार मलेसिया पुग्नेछन्।
यहि सेप्टेम्बर १५ तारिकबाट संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई) मा संचालन हुने एसिया कपको छनौटका लागि नेपाल सहित अन्य ६ टोलीले छनौट प्रतियोगितामा भागलिंदै छन्। प्रतियोगितामा आयोजक मलेसिया, नेपाल, युएई, हंगकंग, ओमान र सिंगापुर भिड्दै छन्। यस प्रतियोगिताको बिजेताले एसिया कपको समुह “ए” मा रहेर भारत र पाकिस्तानसंग समुह चरणमा नै खेल्ने मौका प्राप्त गर्नेछ।
? SAVE THE DATES!
The ACC Asia Cup Qualifiers is all set to take place in Malaysia between 27th August and 7th September, 2018!
Stay tuned for more updates shortly! #ACC #AsiaCup2018 #AsiaCupqualifiers
— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2018
यस्तो छ नेपालको खेल तालिका :
२९ अगस्ट – नेपाल Vs ओमान ( बायुमास ओभल मैदान ) , ३० अगस्ट – नेपाल Vs युएई ( किनरारा ओभल मैदान ) १ सेप्टेम्बर – नेपाल Vs मलेसिया ( बायुमास ओभल मैदान ) २ सेप्टेम्बर – नेपाल Vs सिंगापुर ( युकेएम ओभल मैदान ) ४ सेप्टेम्बर – नेपाल Vs हंगकंग ( युकेएम ओभल मैदान ) ६ सेप्टेम्बर – फाईनल ( किनरारा ओभल मैदान )
अभ्यास भ्रमणमा शत-प्रतिशत जित :
प्रतियोगिताको तयारिका लागि श्रीलंका पुगेको नेपाली टोलीले स्थानीय क्लबहरुसंग ३ अभ्यास खेल खेलेको थियो। आर्मी क्रिकेट क्लब, ब्लुमफिल्ड क्रिकेट क्लब र कोल्ट्स क्रिकेट क्लब बिरुद्धको तिनवटै खेलमा नेपालले जित समेत दर्ता गर्यो।
पहिलो अभ्यास खेलमा अरिफ शेखले उत्कृस्ट ब्याटिंग गर्दै ८९ रनको पारि खेलेपछि नेपालले आर्मी क्रिकेट क्लबलाई ६७ रनको अन्तरले पराजित गरेको थियो। नेपालको जितमा बलिंगतर्फ सोमपाल कामी र बसन्त रेग्मीले समान ३-३ विकेट लिएका थिए।
यस्तै ब्लुमफिल्ड क्रिकेट क्लब बिरुद्धको दोस्रो अभ्यास खेलमा भने नेपालले डक वर्थ लुईस मेथडका आधारमा १७६ रनको जित निकालेको थियो। सो खेलमा नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले आक्रामक ब्याटिंग गर्दै १२१ रन जोडेका थिए। यस्तै सागर पुनले समेत ९२ रनको उत्कृस्ट इनिंग खेलेका थिए।
अभ्यास भ्रमण अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा भने पारस खड्का र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्ध-शतक बनाएपछि नेपालले कोल्ट्स क्रिकेट क्लबलाई ५ विकेटले पराजित गरेको थियो। सो खेलमा नेपालको बलिंगतर्फ सोमपाल कामीले ३ विकेट हात पारेका थिए।
प्रतियोगिताअघि के भन्छन् कप्तान र प्रशिक्षक ?
एसिया कप छनौटको अभ्यासका लागि श्रीलंका प्रस्थान गर्न अघि कप्तान पारस खड्काले एसिया कपमा छनौट हुनु नेपालको लागि सुनौलो लक्ष्य रहेको बताए। कप्तान पारसले भने, “एसिया कपमा छनौट हुनु नेपालको लागि सुनौलो मौका हो। हामी छनौट भएर भारत र पाकिस्तानसंग खेल्ने मौका गुमाउन चहाँदैनौ। यो बर्षभरि हामीले जसोतसो गरेर भएपनि नतिजा आफ्नो पक्षमा ल्याएका छौं र यस्तो अवसर फेरीफेरी नआउन सक्छ त्यसैले हाम्रो अन्तिम लक्ष्य नै एसिया कपमा छनौट हुँने रहनेछ।”
Jagat Tamata Speaks Ahead Of Sri Lanka Departure
यस्तै नेपाली क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटाले भने नेपाली टोलीमा युवा खेलाडीहरुको बाहुल्यता रहेकाले त्यसले आफ्नो खेलमा सहयोग पुर्याउने बताए। उनले थपे, “सबै टोलीले सबैसंग खेल खेल्नु पर्ने भएकाले सबैसंग डर नै हुन्छ। तर हामीले हाम्रो बिपक्षिलाई बुझेका छौं र हामी राम्रो क्रिकेट खेल्दै नतिजा निकाल्ने छौँ। टोलीमा नयाँ खेलाडीहरु पनि छन् र अरु टोलीको तुलनामा हाम्रो टिम युवा रहेकाले त्यसले फिल्डिंगमा समेत हामीलाई सहयोग पुर्याउने छ।”
एसिया कप छनौट अन्तर्गतका खेलहरु ५० ओभरको रहनेछन्। नेपाल र संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई) बिचको खेलले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता पाउनेछ भने अन्य खेलहरुले लिस्ट एको मान्यता पाउनेछन्। सम्पूर्ण खेल मलेसियन समय १० बजे बिहान अर्थात् नेपाली समय ७:४५ बजे बिहान सुरु हुनेछ।